Mareykanka - BBC News Somali
Xiisadda Iiraan iyo Mareykanka: Zarif oo sheegay inuusan 'wax dagaal ah jiri doonin'
Xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Tahraan waxa uu ku adkaysanayaa in dalkiisu uusan doonayn inuu faraha la galo wax colaad ah.
Suurtagal ma tahay in uu dagaal ka dhex qarxo Iiraan iyo Mareykanka?
Xiisadda u dhaxeysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa cirka isku shareertay
Maxaa ku kalifay ninkan inuu gacantiisa lugta isaga jaro?
Ninkan beeraleyda ah wuxuu sharraxaad ka bixinayaa arrintii ku kalliftay inuu lugta iska gooyo isagoo kaligiis ah oo gacantiisa adeegsanaya.
Trump oo soo dhaweynaya qaar ka mid ah soogalootiga
Madaxweynaha Maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiyey qorsheyaal ku aaddan nidaamka socdaalka ee maryakanka kaas oo tixgalin gaar ah siinaya dhallinyarada, dadka si wanaagsan wax u bartay, iyo shaqaalaha afka Ingiriisiga yaqaan.
Iiraan: weerar kasta oo Suhnuuniyadda Mareykanka nooga yimaadda waan iska difaaceynaa
Saraakiisha sarsare ee dalka Iiraan ayaa sheegay iney diyaar u yihiin iney iska difaacaan dagaal kasta uu Mareykanka ku soo qaado.
Xaalad degdeg ah oo qaran oo lagu ilaalinayo hannaanka computer-ada ayaa loogaga dhawaaqay waddanka Mareykanka, hal shirkad ayaase la rumaysan yahay in arrintaasi lagu baltilmaameedsanayo waa Huawei ee. Halkan ka akhriso sababta shirkadda tiknolojiyadda ee Shiinaha ay warbaahinta caalamka u saaran tahay.
'Soomaali la kala dooransiiyay Salaadda iyo shaqada'
Haween Muslimiin ah ayaa maxkamad ku taalla gobolka Minnesota u gudbiyay dacwad ka dhan ah shirkadda Amazon.
Waxay u mahadcelisay gabar aysan garanayn oo noolasheeda badbaadisay
Haweeney ayaa waxa ay sheegaysaa inay ‘xaadda istaagtay’ markii ay akhrisay warqad kaga timid qoyska gabadha ugu deeqay wadnaheeda.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa hay'adda NASA ku amray inay sida ugu dhakhsiyaha badan ku tagto Dayaxa
Wuxuu sheegay inuu laaluush siiyay raggii loogu diray inay meydkiisa aasaan.
Ilhaan Cumar: Waxaan dhibaato kala kulmay Donald Trump
Waxay sheegtay inay si wadajir ah ay ugu hortagi doonaan dhibaatooyinka lasoo gudboonaado.
Rakaabka maisku haleyn karaan kuraasta dambe ee gawaarida?
Suunka badqabka rakaabka ee ku dhagan kuraasta dambe ee baabuurta ayaa lagu sheegay in uu dhaawac u horseedi karo rakaabka.
Madaxweyne ku xigeenka Mareyknaka Mike Pence ayaa sheegay iney Ilhaan Cumar meelna uga bannaaneyn guddiga arrimaha dibadda ee Kongreska.
Rouhani: Iiraan waxaa soo food saaray cadaadis aan horay loo arag
Madaxweynaha dalka Iiraan Hassan Rouhani ayaa shacabka dalkaasi ugu baaqay iney midoobaan.
Ibrahim Hirsi wuxuu dib ugu laabtay Muqdisho isaga iyo laba saaxiibbadii ah 18-kii Maarso markaas oo ay gaadhigiisa haleeshay duqaynta xagga cirka ah ee Maraykanku ka fuliyo Soomaaliya.
Maraykanka oo Bariga Dhexe u diraya Habka difaaca gantaalaha ee Patriot
Maraykanka ayaa Bariga Dhexe u diraya gantaalaha difaaca ee Patriot loo yaqaan ayadoo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhaxaysa Maraykanka iyo Iran.
Trump: Mareykanka soo galootiga wuu ka buuxsamay, balse ma run baa?
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu buuxsamay, sidaa darteedna uusan qaadi karin soo galooti cusub
9 Maajo 2019
Maraykanka oo hakiyay heshiis uu maydad kula soo wareegayay
Dawladda Maraykanka ayaa hakisay dadaalladii ay kula wareegaysay haraaga askartii laga laayay intii uu socday dagaalkii Kuuriya, iyadoo bartanka lagaga jiro xilli uu go'ay xiriirkii uu dalku la laahaa Kuuriyada Waqooyi.
FBI-da oo ku dheggan wiil Soomaali ah oo mar la shaqayn jiray
Wiilkan ayaa kasoo hor muuqan doona maxkamad ku taalla magaalada Alexandria ee gobolka Virginia
8 Maajo 2019
Wasaaradda Macdanta iyo Shidaalka Ethiopia oo shaacisay keydka gaaski ugu badnaa oo laga helay Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
7 Maajo 2019
Xukuumadda Soomaaliya: Somaliland waxay diidday in Abiy Axmed iyo Farmaajo oo wada socda ay ka degaan Hargeysa
Muuse Suudi: Ma siyaasi sharciga ogol baa mise hogaamiye kooxeed soo rogaal celiyay?